Fomba ataon’ireo Rosiana hanoherana ny ady ao Okraina avy amina fanjakana tsy refesi-mandidy iray · Global Voices teny Malagasy
Manolotra saripikan'ireo hetsi-panoherana manerana an'i Rosia ireo loharano tsy miankina
Voadika ny 23 Mey 2022 14:03 GMT
Vakio amin'ny teny srpski, Italiano, Română , Español, українська, Português, English
Anatin'ity soratra an-drindrina ity (graffiti)i, ny marika Z dia nampiasaina ao anatin'ny teny hoe Fasisma. Sary: Archive/fampiasàna nahazoana alàlana
Hatramin'ny nanombohan'i Rosia ny fananiham-bohitra ataony ao Okraina, nivadika haingana be niala tamin'ny fanaovana didiko fe-lehibe “mifangaro” ny fitondràna, ka lasa iray tsy refesimandidy. Ireo media Tandrefana sy Rosiàna ary ireo tranonkalan-tambajotra sôsialy toy ny Meta, Twitter, sy ny maro hafa dia bahanana mba tsy hanely fanohanana “firaisankina” manoloana ny ady sy ilay rosiàna mpanao jadona, Vladimir Poutine. Nanerana ny firenena dia nisy fampielezankevitra nampiasàna ny litera latina Z sy V ho entina maneho fanohanana ilay ady, izay ambaran'ny mpandinika maro ho mariky ny fitomboan'ny fasisma. Nisongadina be ny fampiasan'i Rosia ny marika Z sy V, ka ny “V” milaza ny hoe “victory” (fandreseana) ho an'ny hetsika miaramilan'i Poutine. Tsy misy ao anatin'ny alfabeta rosiàna na ny endri-tsoratra Cyrillic ny litera Z , saingy narindra hifanaraka amin'ny litera latina mba ho fitaratry ny fanononana ny teny rosiàna “за,” midika hoe “ho an'ny.” Ao anatin'ny tontolon'ny ady, io dia midika hoe “ho an'ny firenena”.
Amin'izao fotoana ireo dia tsy ara-dalàna ao Rosia ny fiantsoana ny ady ho “ady”na ny fanoherana azy io amin'ny fomba rehetra. Izay mankahatra izany dia mety hiatrika famonjàna hatramin'ny 15 taona. Araka ny nambaran'ny Lexus ao anatin'ny governemanta rosiàna, ny zavamisy mitranga dia “hetsika ara-tafika.” Na ireo olona mandeha mivoaka eny an'arabe aza, izay tsy mitondra afa-tsy tànam-polo (manao fihetsika toy ny hoe milanja sorabaventy ry zareo) dia samborina. Raràny ihany koa ny manoratsoratra, na inona na inona, manohitra ny ady eny amin'ireo toerana natao ho an'ny daholobe sy ao amin'ny media sôsialy.
Na izany aza, marobe ny olona ao Rosia no manohy mankahatra ireo manampahefana. Ankoatra ireo hetsipanoherana ataon'ny tsirairay rehefa toherin'ny olona ny fahafantarany mialoha hoe hosamborina izy, nipongatra ireo endrika hafa amin'ny tsy faneken'ny vahoaka. Mampiasa graffiti ny olona, mamela zavatra eny an-dalana, ary mahita fomba hafa hanehoan-dry zareo ny fanoherany eo ambanin'ny horohoro tsy mitsahatra ny ho voasazy.
Ohatra, ilay loharanom-baovao tsy miankina tsy fahita firy, ny gazetin'ny mpianatra DOXA sy ny fantsona Telegram an'ilay mpanao gazety Roman Super, dia mamokaa andian-tsaripika momba ireo hetsipanoherana isanandro mampiseho amin'ireo mpamaky fa ao anatin'ny fiarahamonina rosiàna dia misy mihoatra noho ny “miray hina” manodidina ny laingan'ny prôpagandy.
Ny Global Voices, rehefa nahazo alàlana tamin'ny mpanoratra, dia mamoaka fantina saripika misy ireo endri-panoherana isanandro avy amin'ny lafivalon'ny firenena.
Sarin'i Poutine, ny minisitry ny fiarovana Shoigu, ny filohan'ny antenimieran-doholona Matvienko ary ireo hafa mpikambana ao anatin'ny faribolana akaiky an'i Poutine. Azo vakiana toy izao: “Aza sahisahy hitarika an'i Rosia hiaraka aminao any am-pasanao.” Sary: Archive/nahazoana alàlana
Fasana sandoka any amin'ny iray amin'ireo tanandehibe rosiàna, mivaky toy izao ny takelaka “ratsy ny ady.” Sary: Archive/nahazoana alàlana
Soratra milaza hoe “Google Bucha” (tanàna iray nanaovan'ny tafika rosiàna heloka an'ady betsaka nandritra ny fibodoana nataony tamin'ity faritany okrainiàna ity). Sary: Archive/nahazoana alàlana
Soratra milaza hoe “Tsaroanao ve hoe nanana drafitra momba ny hoavy ianao? Lavina ny ady.” Sary: Archive/nahazoana alàlana
Graffiti ampitoviana amin'ny marika Z tamin”ny swastika (mariky ny nazi). Sary: Archive/nahazoana alàlana
Tanambokovoko vita tamin'ny hazo, misoratra eo ny hoe Bucha 2022. Sary: Archive/nahazoana alàlana
Toy ny filazàna iray mahazatra momba ny “fanamboarana tafo,” hoy ity soratra ity hoe: “Ady ny hetsika manokana iray. Lasa adala ny filoha ary tsy misy olona maniry hifandahatra aminy.” Sary: Archive/nahazoana alàlana
Fametrahana akanjo tohitena an-jazakely iray milaza ny daty nahafatesan'ny ankizivavy kely telo volana, ny reniny ary ny renibeny nandritra ny daroka baomba tao Odessa, Okraina, nataon'ny tafika rosiàna. Sary: Archive/nahazoana alàlana
Takelaka milaza hoe: “Tsy maintsy SAKANANTSIKA!” Sary: Archive/nahazoana alàlana
Soratra milaza hoe: “Hatraiza no vitanao aleha ao anatina fandoroana faty mandehandeha (mobile crematorium)?” Sary: Archive/nahazoana alàlana
Takelaka milaza hoe “Manaova taokanto. Fa tsy ady” manaraka ny lokon'ny sainam-pirenena okrainiàna. Sary: Archive/nahazoana alàlana
“Fa inona no mitranga ao Rosia? – Rendrika izy” (entina milaza ny tenin'ny Poutine momba ny zava-nanjo ilay sambo mpisitrika Koursk tamin'ny 2004). Sary: Archive/nahazoana alàlana